Malunga nathi - ukurhweba ngaphakathi kunye nokuthumela ngaphandle iZhongnan, Ltd.
Zhongnan Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd. yasekwa ngo-2011 kwaye ibekwe e Yiwu, China, isixeko ezaziwayo-kakuhle ezincinane ehlabathini jikelele. Inkampani iqulathe iSebe lezoRhwebo lwaNgaphandle, iSebe lamaXwebhu kunye neSebe lokuGcina. Ikakhulu ibandakanyeka kulo lonke ushishino olunxulumene nokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe, ukubonelela ngoguqulelo lweSpanish kunye nesiNgesi, kunye nazo zonke iinkqubo zorhwebo lwangaphandle zokuthengwa kwangaphandle, ukuhlolwa kunye nokuthunyelwa e-China. Ukuhamba nabathengi kuyo yonke inkqubo yokuthenga kuyo yonke imimandla yase China, ukuqokelela kunye nokugcina ukuthunyelwa, jonga isimbo kunye nomgangatho, uqinisekise umgangatho wokuthengwa kwabathengi, kwaye uxhase ukukhula kwabathengi ukufezekisa ukukhula.
Izinto zeOfisi, izixhobo, izinto zokudlala, iivenkile zesebe, izinto zeholide, izipho zoyilo, iimveliso zombane, oomatshini, njl.
Inkampani ibambelela kumgaqo "wentembeko-esekwe, igama lokuqala" kunye nesimo sengqondo esifanelekileyo senkonzo, kwaye iseke igama elihle kunye nodumo phakathi koosomashishini bamanye amazwe kunye nabathengisi. Emva kweminyaka eli-10 yophuhliso, ukusuka kumthengi wokuqala ukuza kuthi ga ngoku, abathengi babekwe ePeru, eBolivia, eMexico, eArgentina, eColombia nakwamanye amazwe aseMzantsi Melika.
Siyakwamkela ngokufudumeleyo kwihlabathi liphela ukuba usijoyine kwaye masikhule kunye!
Inkampani ineqela lophuhliso lobuchwephesha obunolwazi olunobutyebi kunye namava e-R & D atyebileyo kwicandelo lenethiwekhi kunye netekhnoloji yonxibelelwano, usetyenziso olukhulu lwesiseko sedatha, kunye neqela lenkonzo yobuchwephesha enomgangatho olungileyo wokubonelela ngurhulumente ophezulu kunye nabathengi . Iqela lenkonzo.
Inkampani ijolise ekomelezeni ukwaziswa kwabasebenzi kunye noqeqesho nentsebenziswano yabasebenzi abakhoyo. Ngokwesicwangciso senkampani, inkampani iyaqhubeka nokutsala kwaye yonyuse abasebenzi bezobuchwephesha kwinkampani, ukuze inani labasebenzi bezobuchwephesha liqhubeke ukwanda, ekugqibeleni lifike ngaphezulu kwe-50%. Kwangelo xesha, komeleza uqeqesho lwabasebenzi abakhoyo. Ngokweemfuno zenkampani kunye nophuhliso lomntu, inkampani inika abasebenzi amathuba oqeqesho. Inye kukuqhubeka ngokuqhubekayo nokuphucula ubuchwephesha ngokufunda kunye nokusebenza ngaphakathi kwenkampani, kwangaxeshanye ukuqhuba uqeqesho lwangaphandle lwabasebenzi abafanelekileyo. Ukuphucula ubuchule babo bophuhliso lobuchwephesha. Inkxaso ikwabonelelwa kwimfundo. Kwangelo xesha, ibonelela ngolunye uhlobo malunga nomvuzo, izindlu kunye nentlalontle, kwaye yamkela iitalente zokujoyina inkampani.
Emva kweminyaka elishumi yokuqokelela kunye neminyaka elishumi yophuhliso, inkampani inamakhulu amawaka abathengi. Ngelixa iphuhlisa ishishini eliphambili, inkampani ikhawulezisa inguqu yayo, ikhawulezisa uphuhliso lwayo olwahlukeneyo, kwaye yakha ngenkuthalo iqonga lobuchwephesha be-e-commerce elihlangabezana neempawu zeshishini leenkonzo zale mihla.
Sigxile ekuVunjweni kweMveliso, ukuQokelelwa kweNkcukacha kunye nokuKhokelwa kweNtengiso, iSampulu yokuNikezela, ukuHanjiswa koMyalelo, ukuKhangela ukuKhangela, uLawulo loMgangatho, ukuHlawulwa kweNtlawulo, ukuGcinwa, ukuHanjiswa kunye namaxwebhu afanelekileyo okuthunyelwa kwamanye amazwe njl njl. ngqo ukudibanisa iifektri ukwenza inzuzo yakho enkulu.